I-China KingKong 3 Tattoo Cartridge Umatshini wokuvelisa kunye neFektri | MOLONG
Imoto yaseJamani engenasiseko
Isantya sokujikeleza: 12V 11000rpm
Itorque enkulu eyi-480
UKUTHUTHA KWEMOYO: Eyona ndlela yokuhambisa ngenqanawe ngobukhulu obuphakathi (ngaphezulu kwe-100kg) okanye xa umda wexesha lakho ungekhe ulinde ukuthuthwa kolwandle. Amaxabiso okuthuthwa komoya asekwe kubunzima nakwivolumu. Ezinye izinto ezinjengogwebu zithatha indawo eninzi kodwa zikhanya kakhulu kwaye ezinye izinto ezinje ngentsimbi zinzima kakhulu kodwa zithatha indawo encinci. Okwenziweyo iindleko zothutho zithatha ubunzima kunye nomthamo zombini ukuba ziqwalaselwe. Ngokubanzi, ixesha lokuhamba alikho ngaphezulu kweentsuku ezili-10 zokusebenza kwaye zihlala kuphela ziintsuku ezingama-3-5. . I-Air Waybill (i-AWB) bubungqina obubhaliweyo besivumelwano phakathi kwe-EM kunye nomphathi. I-AWB iya kusiwa kunye nomthwalo womoya kwaye isebenza njengerisithi yokuhanjiswa, ifom ye-invoyisi, isatifikethi se-inshurensi, kunye noxwebhu olufunekayo kugunyaziso lwangaphandle.
UKUTHUTHA KWELWANDLE: Eyona ndlela ineendleko ezifanelekileyo kunye neendlela eziphambili zokuhambisa ngengeniso kumazwe angaphandle kunye namashishini athumela ngaphandle. Singalungiselela ukuhambisa ngenqanawa ukusuka kumzi-mveliso wethu, ukusuka kwizibuko elikufutshane le-shanghai, ukuya kwizibuko elikufutshane, okanye kuyo yonke indlela eya kumaziko akho (kungabandakanyi irhafu neerhafu). Singathumela imithwalo epheleleyo yeekhonteyina (i-FCL) okanye ngaphantsi kwemithwalo epheleleyo yeekhonteyina (LCL). Iirhafu zesikhongozeli se-40 'zimalunga ne-50% ngaphezulu kwesiqulatho se-20 kwaye i-40' HQ imalunga nexabiso elifanayo njenge-40 'GP container. Umthwalo omkhulu umalunga neetoni ezingama-20. Abathengisi bethu banokukucebisa kwiingcebiso zokuhambisa. Umzekelo, ukuba ungaphantsi kwe-8cmb siya kukucebisa ukuba uthumele nje i-LCL. Ukuba ungaphezulu kwe-15cbm usenokucinga ngokuthenga ngakumbi ukulayisha ikhonteyina epheleleyo kuba eyona ndlela inexabiso eliphantsi iya kuba kukuthumela iFCL. Ubunzima obuncinci / ubungakanani bexabiso le-LCL yi-1 cbm okanye itoni enye, ke kwii-odolo ezingaphantsi kwe-100kg sinokucebisa ukuba uthutho lomoya okanye nokuthumela ngenqanawa.
Ukuhamba ngolwandle kuhamba kancinci kungoko ukucwangciswa okufanelekileyo kubalulekile. Siphakamisa ukubeka iiodolo kwiinyanga ezi-3 kwangaphambili. Umzekelo. Ukuba ufuna iimpahla zakho zilungele ixesha leKrisimesi, kungcono ubeke iodolo yakho ngo-Agasti okanye nangaphambi koko. Unokwahlulahlula ukuhambisa ngenqanawa kwiindawo ezimbini: ipesenti encinci ngomoya, ukuphumla ngolwandle.
Ukucoca kunye nokuchola okanye ukuhanjiswa kweodolo yakho kungenziwa ngumthengi okanye ngumrhwebi wesiko. Uya kuba noxanduva lokufaka amaxwebhu okungena kumasiko, ulungiselele ukuhlawulwa kwayo nayiphi na imisebenzi, iirhafu kunye neminye imirhumo. Kuxhomekeka kwilizwe, inokuba nokukhohlisa; ke sicebisa ukuba kusetyenziswe abarhwebi abaqhelekileyo ukuze bancede. Siza kukubonelela ngeBhili yoLuhlu, i-invoyisi, iSiqinisekiso seMvelaphi, kunye noLuhlu lokuPakisha. Soloko ujonga ukuqinisekisa ukuba ulwazi luzalisekile kwaye luchanekile kwaye uluthumele kumthengisi wakho wamasiko ngokukhawuleza.
Egqithileyo Izaqhwithi ezimhlophe ezilahlwayo Iingcebiso
Okulandelayo: Ukuphakama kweTattoo kubude obuMnyama bokuPhumla
5PCS & 3PCS ukugqobhoza Forceps Tattoo Pierci ...
Ukuma kweI-Cups ye-inki yeshelufu
1pc Tattoo Bead Ball Grabber 4 uzipho Stainless S ...